Yintoni evela kwiLinux?
Ukusuka kwiLinux (aka <° Linux) yindawo enikezelwe kwizihloko ezinxulumene isoftware y ubuchwephesha basimahla. Injongo yethu ayikho enye ngaphandle kokubonelela bonke abasebenzisi abaqala nje kwihlabathi le GNU / Linux, indawo apho unokufumana ulwazi olutsha ngendlela elula neyona inomdla.
Njengenxalenye yokuzibophelela kwethu kwihlabathi leLinux kunye neSoftware yasimahla, eDesdeLinux sibe liqabane le- Ukukhululeka I-2018 yenye yezona ziganeko zibalulekileyo zecandelo eSpain.
Ukusuka kwiqela labahleli beLinux lenziwe liqela le iingcali kwi-GNU / Linux, izixhobo zekhompyutha, ukhuseleko lwekhompyuter kunye nolawulo lwenethiwekhi. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Umsebenzisi ophakathi weLinux onomdla kubuchwephesha obutsha, i-gamer kunye neLinux entliziyweni. Ndifundile, ndisebenzise, ​​ndabelana, ndonwabile kwaye ndasokola ukusukela ngo-2009 ngeLinux, ukusukela kwiingxaki zokuxhomekeka, ukothuka kernel, izikrini ezimnyama kunye neinyembezi ekuhlanganisweni kwekernel, konke ngenjongo yokufunda? Ukusukela ngoko ndisebenzile, kuvavanywa kwaye ndacebisa inani elikhulu lonikezelo lwentando yam yiArch Linux elandelwa yiFedora kunye ne-OpenSUSE. I-Linux ngokungathandabuzekiyo yayinempembelelo enkulu kwizigqibo ezinxulumene nobomi bam bokufunda kunye nomsebenzi kuba kungenxa yeLinux endandinomdla kwaye ngoku ndiya kwilizwe lenkqubo.
Ukufaka i-Linux Post
Oko ndisemncinci bendibuthanda ubuchwephesha, ngakumbi into enento yokwenza ngqo neekhompyuter kunye neeNkqubo zabo zokuSebenza. Kwaye ngaphezulu kweminyaka eli-15 ndiye ndathandana kakhulu ne-GNU / Linux, nayo yonke into enxulumene neSoftware yasimahla kunye noMthombo oVulekileyo. Kuyo yonke le nto nangaphezulu, kule mihla, njengeNjineli yeKhompyutha kunye nengcali enesatifikethi samazwe aphesheya kwiiNkqubo zokuSebenza zeLinux, bendibhala ngokuthanda kwaye iminyaka eliqela ngoku, kule webhusayithi intle neyaziwayo eyiDesdeLinux, kunye nabanye. Apho, ndabelana nawe yonke imihla, uninzi lwezinto endizifundayo ngamanqaku asebenzayo naluncedo.
Ukuthanda kwam uyilo lwekhompyuter kundikhokelele ekubeni ndiphande kwangoko uluhlu olungaphezulu nolungahlukananga: inkqubo yokusebenza. Ngomdla okhethekileyo wohlobo lwe-Unix kunye neLinux. Kungenxa yoko le nto ndichithe iminyaka eliqela ndibandakanyeka ekufundeni nge-GNU / Linux, ukufumana amava okusebenza njengedesika yoncedo kunye nokunika iingcebiso kubuchwepheshe basimahla beenkampani, ukusebenzisana kwiiprojekthi ezahlukeneyo zesoftware eluntwini, kunye nokubhala amawaka amanqaku kumanqaku ahlukeneyo. imidiya yedijithali ekhethekileyo kuMthombo ovulekileyo. Soloko unenjongo enye engqondweni: ungayeki ukufunda.
UAlexander (aka KZKG ^ Gaara)
Ndiqale uhambo lwam eLinux ndibuyele ngo-2007, kule minyaka idlulileyo ndigqithile kulwabiwo olungenasiphelo, ndibone uninzi lwazo luzalwa kwaye abanye besweleka, ukuba kukhetho lomntu endinokukhetha kuye iArchLinux kunye neDebian ngaphezulu enye engenye. Ndisebenze ngobuchwephesha iminyaka njengomlawuli wenethiwekhi kunye neenkqubo ze-UNIX, kunye nomphuhlisi wewebhu wezisombululo ezilungiselelwe umthengi.
Ndiyakuthanda ukuntywiliselwa kwihlabathi leLinux, ndisebenzisa ngokukodwa ii-distros zayo, ngakumbi ezo zenzelwe amashishini. Inkululeko yeKhowudi ilingana ngokuthe ngqo nokukhula kombutho. Kungenxa yoko le nto iLuxux yinkqubo engenakubakho ebomini bam bemihla ngemihla.
Umdwelisi weNkqubo oyithandayo iLinux kunye nolwabiwo lwayo, kangangokuba ibe yinto esisiseko kumhla wam. Ngalo lonke ixesha kuphuma i-distro entsha esekwe kwiLinux andinakulinda ixesha elide ukuyivavanya, kwaye ndiyazi kakuhle.